अल्पनाले छोरालाई सुम्सुमाउने ती हात सधैका लागि गुमाईन ! – Khabar Patrika Np
अल्पनाले छोरालाई सुम्सुमाउने ती हात सधैका लागि गुमाईन !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २६, २०७७ समय: २३:४७:१८
लम्की चैत्र २६ गते । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ७ करैचा गाउँमा रहेको अल्पना चौधरीको घर पुग्दा भर्खरै अस्पतालबाट घर आउनु भएकी कल्पनाको दुबै हात का टि’एका थिए । काखमा डेढ बर्षीया छोराले दूध चु’सी रहेका थिए । नजिकै उभिएका श्रीमानले बोत्तलबाट अल्पनालाई पानी खुवाउदै हुनुहुन्थ्यो। एका बिहानै र’क्सिले मा’तेका उनका श्रीमानको न’साका कारण बोलेको बोली समेत बु’झिन गारो थियो ।